Author Topic: Su'aal: Qaniinyada Kudkudaha, Ma Sun baa? (Read 6652 times)
« on: August 04, 2017, 12:45:49 AM »
Asc dhammaantiin xubnaha bogga, martida iyo Somalidoc.
Intaa ka dib.
Waxaan maanta tagnay suuq xoolaha lagu iibiyo, intii aan suuqa joognay waxaa lugaha inta hoose naga qan qaniinayey bahallo hoosaad yar yar oo qaniinyo kulul, waxaanu aheyn ilaa afar qof.
Aniga iyo mid kale waxaanu dareennay cun cun aad u kulul oo dhinaca sare ee cagaha ah.
Saacaddo ka dib, markii aan ka soo tagnay suuqii xoolaha, aniga waxa aan isku arkay in ay caguhu i barareen, qanjirrada qaarkoodna aan xanuun ka dareemay iyadoo uu cun cunkii cagahana igu sii kordhay.
Ka dib, waxaan cagaha mar mariyey Xabadtu Sowdo iyo saliid Macsaro.
Halkaan ka akhriso Xabad Sowda http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5502.0
Halkaan ka akhriso saliid Macsarada http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=3195.0
Waxaan kaloo saar saarey biyo kulul oo aan ku shubey koob.
Sidaas buu xanuunkii iiga ba'ay.
Su'aasheyduna waxay tahay;
Qaniinyada Kud kudaha ma sun baa?
KUD KUDE:- (-ha) Bahal yar yar oo Geella iyo xoolaha qaniina oo aan duul duulin, ishuna aanay fudeyd u arkeynin, muuqaalkiisa oo digada u eg darteed.
Re: Su'aal: Qaniinyada Kudkudaha, Ma Sun baa?
« Reply #1 on: June 03, 2018, 07:36:32 PM »
Kud-kuduhu waa jaad ka mid ah shilinta oo waaweyn, wuxuu keenaa xanuun qanjirrada barariya oo keeno murqo xanuun, barar, daal iyo tabardarri jirka ah, faahfaahinta ka akhriso qoraalkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=1818.0
Views: 16875 February 11, 2009, 09:53:51 PM
Views: 13971 February 03, 2011, 08:12:59 PM
Views: 245028 August 30, 2019, 01:26:40 PM